Igqwetha eAmsterdam | I-Lawfirm, igqwetha-lomthetho, Law & More
Ngaba ungusomashishini okanye umntu ozimeleyo ufuna ulwazi olukhethekileyo, ngaphandle kokulahleka konxibelelwano lobuqu? Ke Law & More Ngaba inkampani yomthetho iAmsterdam yeyakho. Law & More Yindawo yokuqina yomthetho eguqulelweyo, eAmsterdam edibanisa ukwaziwa kweofisi enkulu ngononophelo kunye nenkonzo ehambelanayo oyilindeleyo kwiofisi yeeboutique. Kwaye ngelixa ezinye iifemu zomthetho zibonelela ngoncedo lwezomthetho kuphela, abameli be Law & More yiya inyathelo elinye ngaphezulu. Iingcali zethu eAmsterdam aziboneleli nje ngenkxaso yezomthetho kwaye zikunceda njengomcebisi okanye ngesimangalo, kodwa amagqwetha a Law & More sebenza njengeqabane lakho elichithekayo kwicandelo lezomthetho.
NGABA UFUNA UMLAYIZO E-AMSTERDAM?
Ngaba ungusomashishini okanye umntu ozimeleyo ufuna ulwazi olukhethekileyo, ngaphandle kokulahleka konxibelelwano lobuqu? Ke Law & More Ngaba inkampani yomthetho iAmsterdam yeyakho. Law & More Yindawo yokuqina yomthetho eguqulelweyo, eAmsterdam edibanisa ukwaziwa kweofisi enkulu ngononophelo kunye nenkonzo ehambelanayo oyilindeleyo kwiofisi yeeboutique.
> Ifemu yomthetho eAmsterdam
Kwaye ngelixa ezinye iifemu zomthetho zibonelela ngoncedo lwezomthetho kuphela, abameli be Law & More yiya inyathelo elinye ngaphezulu. Iingcali zethu eAmsterdam aziboneleli nje ngenkxaso yezomthetho kwaye zikunceda njengomcebisi okanye ngesimangalo, kodwa amagqwetha a Law & More sebenza njengeqabane lakho elichithekayo kwicandelo lezomthetho. Sineqela elomeleleyo, elikhethekileyo lamagqwetha elilungele ukukunceda ukusombulula ingxaki yakho yezomthetho nangayiphi na indlela. Ngaba unomdla malunga nendlela yethu yokusebenza? Ke nceda unxibelelane nathi.
Tsalela umnxeba +31 20 369 71 21
Iingcali ze Law & More eAmsterdam
Njengomthetho wezomthetho Law & More uyasebenza kwicandelo lomthetho wokudibana, umthetho wepropathi nobukrelekrele, kunye nomthetho wabasebenzi, umthetho wokungena kwelinye ilizwe kunye nomthetho wosapho. Ngaba ujonge enye indawo yomthetho? Emva koko jonga iphepha lethu le-apraisals lobuchule apho zonke iindawo zethu zomthetho zidweliswe khona. Amagqwetha ethu ziingcali kuzo zonke iindawo ezikhankanyiweyo kwaye ayakuvuyela ukukunceda nakweyiphi na indawo. Xa isihla kwiinkampani. Law & More Izenzo zoosomashishini kumasebe ahlukeneyo, anje ngeshishini, ezothutho, ezolimo, ezempilo kunye nezentengiso. Ukongeza, abameli bethu e-Amsterdam banamava amaninzi ekusebenzeni iinkampani eziphuhlisayo kunye nokunceda okanye ukukhokela ukuqala. Amagqwetha ethu asetyenziselwa ukusebenza kwicandelo lobuchwephesha, uphando, uphuhliso, ukusekwa kwamalungelo obunini bemveliso, ukukhupha iilayisensi kunye nokwakha ukwandiswa.
Ifemu yomthetho eAmsterdam
Ukongeza kulwazi lwethu olubanzi lomthetho waseDatshi (weenkqubo), umthetho-siseko wethu ngowokwamazwe aphesheya ngokwamanqanaba nobume beenkonzo zethu kwaye usebenzela uluhlu lwabathengi abangamaDatshi nabamazwe angaphandle, ukusuka kumashishini nakumaziko ukuya ebantwini. Ukuze sikwazi ukubonelela abathengi bethu ngenkonzo efanelekileyo, sinalo iqela elizinikeleyo lamagqwetha eelwimi ezininzi kunye nabezomthetho, abazi kakuhle ulwimi lwaseRussia, phakathi kwezinye izinto. Bayakwazi ukukhokela kwaye bakuncede ukusuka ekuqaleni ukuya esiphelweni sayo nayiphi na inkqubo yezomthetho, beseka umsebenzi wabo kwisicwangciso esiliqili, nesicwangcisiweyo. Nokuba ngowuphi na ilizwe, imigaqo esisiseko ku Law & More kukuba wonke umntu kufanele abe nethuba lokuzimela elakhe ilungelo. Amagqwetha ethu ke ngoko alwela elona xabiso lihle lomgangatho kubathengi bethu. Oku kuqinisekisa ukuba ufumana uncedo lwezomthetho kwinqanaba eliphezulu nokuba utyalomali lwakho luya kuzihlawulela.
Ke, apho abameli abaqhelekileyo banikezela kuphela ngolwazi olusemthethweni kunye neso eligxekayo, abameli bethu e-Amsterdam banikezela ngenkonzo ngakumbi kunezinye iifemu zomthetho. Law & More Iqela eAmsterdam lisebenza ngendlela esebenzayo nebuqu kwiinkampani zamanye amazwe nezikazwelonke kunye nabantu babucala. Kwiofisi yethu eAmsterdam sineeyure zokuvula kwaye zivulwa ngokuhlwa nangeempelaveki. Amagqwetha ethu aqhele ukusebenza ngokukhawuleza, ukuze ungaze ulinde ixesha elide impendulo kwi-imeyile yakho okanye ngaphambi kokuba ube nomnye wabasebenzi efowunini. Nokuba iiyure ezingaphandle kweofisi ungasoloko ufikelela komnye wabameli bethu. Isantya kunye nobungcali zibaluleke kakhulu kuthi, oko kuthetha ukuba unokuthembela kunxibelelwano olugudileyo nolunqwenelekayo. Ngaba unomdla kwinkonzo yethu? Ke nceda unxibelelane nathi. Amagqwetha e Law & More zikwinkonzo yakho!
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba yintoni Law & More ndingakwenzela njengeziko lezomthetho eAmsterdam?
Sitsalele umnxeba kule nombolo: +31 20 369 71 21 okanye thumela i-imeyile: